Chọrọ onye ọka iwu iwu gburugburu? Kpọtụrụ anyị
Iwu ike » Iwu ike » Iwu gburugburu ebe obibi
Dịka ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịbịakwute iwu gburugburu ebe obibi ma ọ bụrụ na ị ga -eme ihe banyere ikuku gas, mkpofu ihe mkpofu ma ọ bụ mmetọ ala ma ọ bụ mmiri. Maynwekwara ike ịgbaso atụmatụ zọnkụ na ikikere gburugburu. Abia na mmebi iwu nke obodo, I nwekwara ike iche maka ovu aziza site n’anu ugbo. Gọọmentị na-agba mbọ igbochi mmetọ ma chekwaa ala, ikuku na mmiri site na iwu gburugburu.
Na-achọ onye na-elekọta ụlọ?
Iwu gburugburu ebe obibi
Dịka ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịbịakwute iwu gburugburu ebe obibi ma ọ bụrụ na ị ga -eme ihe banyere ikuku gas, mkpofu ihe mkpofu ma ọ bụ mmetọ ala ma ọ bụ mmiri. Maynwekwara ike ịgbaso atụmatụ zọnkụ na ikikere gburugburu. Abia na mmebi iwu nke obodo, I nwekwara ike iche maka ovu aziza site n’anu ugbo. Gọọmentị na-agba mbọ igbochi mmetọ ma chekwaa ala, ikuku na mmiri site na iwu gburugburu. Emebere iwu a dịka ọmụmaatụ na Iwu Njikwa gburugburu, Iwu Nchịkwa maka Iwu Iwu Gburugburu Ebe obibi na kemgbe afọ 2021 na Iwu Iwu gburugburu. Mkpesa nke iwu gburugburu ndị a na-ewere ọnọdụ n'iwu nchịkwa Dutch, mpụ na iwu obodo. Nyocha nke Ministry of Housing, Spatial Planning na Environment (VROM) na-enyocha ma na-enyocha ụlọ ọrụ maka irube isi n'iwu na ụkpụrụ ndị a.
> Iwu gburugburu ebe obibi maka ụlọ ọrụ gị
> Gburugburu ebe obibi ikike
> Nchịkwa ikike gburugburu ebe obibi nwere oke ule nyocha gburugburu ebe obibi (OBM)
> Iwu Atụmatụ Gburugburu gburugburu ebe obibi
You nwere ike ịkpọtụrụ Law & More maka ozi ndi ozo:
• Iwu usoro iwu ihe owuwu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
• Nchedo nke okike na odida obodo
• atime atụmatụ gbasara ohere na amụma obodo
• Ikike gburugburu na atụmatụ mpaghara
• Ikike gburugburu ebe obibi
Ga-achọ ịmatakwu iwu gbasara nke a? Can nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ndụmọdụ gbasara iwu na enyemaka gbasara iwu maka ajụjụ na nsogbu niile metụtara gburugburu gị. Enwere ike ịmalite usoro iwu maka ụlọ ọrụ gị. Ndị ọka iwu gburugburu anyị dị njikere ịza ajụjụ gị.
Ọkachamara anyị n’iwu ike
Anyị na-elekwasị anya na iwu ike nke na-elekwasị anya na ikuku na ike anyanwụ
Ma iwu Dutch na nke European tinyere maka ike ume. Ka anyị kọọrọ gị ma nye gị ndụmọdụ
Ikike ikike izipu / azụmaahịa
Are na-achọ ọkachamara n’ihe gbasara ire ere ahịa? Obi dị anyị ụtọ inyere gị aka n'ihu!
Onye na-emepụta ike
Na-emeso naanị ike? Ndị ọkachamara anyị nwere obi ụtọ inyere gị aka
inwe onye oka iwu onye
dị njikere mgbe niile nye m,
ọbụna ná ngwụsị izu ”
Iwu gburugburu ebe obibi maka ụlọ ọrụ gị
Kedu iwu gburugburu ebe obibi dị maka ụlọ ọrụ gị yana ma ị ga-emekọ ihe na Ministry of Housing, Spatial planning na gburugburu ebe obibi, dabere na oke ụlọ ọrụ gị nwere mmetụta na gburugburu ebe obibi gị. Na Netherlands, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ atọ kọwaralarịrị ebe a:
Otu A: ụlọ ọrụ ndị dị na ụdị a nwere ntakịrị mmetụta na gburugburu ebe obibi. Companieslọ ọrụ dị na ụdị a nwere ụlọ ọrụ dị iche iche, ụlọ akụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara ma nwee opekata mpe na-emetụta iwu gburugburu. Companieslọ ọrụ ndị a ekwesịghị itinye akwụkwọ maka ikike maka gburugburu ha maka ọrụ ha, ha ekwesịghịkwa ịkọ maka Iwu Ọrụ.
Otu B: A na-etinye ụlọ ọrụ ndị nwere nnukwu mmetụta na gburugburu ebe a na ngalaba B. Maka ọrụ azụmaahịa ha, dị ka ọrụ obibi akwụkwọ na ịkwọ ụgbọ ala na ndozi, a chọrọ ka ha kọọ Iwu Mmemme. Nkwupụta a nwere ike ịma maka itinye ala, mmetọ na mbufe ihe mkpofu ma ọ bụ ihe emetụbeghị. N'ọtụtụ oge, ekwesịrị itinye mmachi ebe nchekwa (OBM).
Udi C: ụlọ ọrụ ndị dị n’etiti ụdị a, dịka ọmụmaatụ ụlọ ọrụ igwe na-arụ ọrụ, na-enwe nnukwu mmetụta na gburugburu ebe obibi. Otu a nwekwara ọrụ nke inye ozi dabere na Iwu Ọrụ. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị a ga-etinyerịrị akwụkwọ ikike maka gburugburu ha maka azụmahịa ha. Ndị ọka iwu iwu gburugburu Law & More determine nwere ike ikpebi n’etiti ngalaba ụlọ ọrụ gị edepụtara yana ọrụ ndị ị ga-agharo iru n’ime ya. Alsonwere ike ịtụ anya enyemaka site na anyị maka itinye akwụkwọ maka ikike gburugburu ma ọ bụ ịme ngosi ngosi nke Iwu Ọrụ.
Gburugburu ebe obibi ikike
Nmehie na udi C ga-etinyerịrị maka ikike mpaghara. Na-enweghị ikike a, amachibido ịmalite, gbanwee ma ọ bụ rụọ ntọala. A ga-emerịrị ọnọdụ ndị a tupu enyeghị ikike gburugburu ebe obibi:
• a gha enwetwe wm wm;
• Ekwesịrị ịhọpụta Wm-Set na Nkwekọrịta Onwe Ndị Na-ahụ maka Gburugburu Ebe Obibi (Okwu General)
Dabere na Iwu Nchịkwa gburugburu ebe obibi, a na-eche na Wm-guzobe ma ọ bụrụ na nguzobe ahụ metụtara ụlọ ọrụ (ma ọ bụ ọ bụrụ nha ụlọ ọrụ), ọrụ ahụ dị n'otu ebe ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii (ma ọ bụ na-alaghachi mgbe niile. otu ọnọdụ) na ọrụ ahụ gụnyere na Ihe Odide Ntụkwasị nke Iwu Iwu gburugburu.
Nchịkwa ikike gburugburu ebe obibi nwere oke ule nyocha gburugburu ebe obibi (OBM)
Companylọ ọrụ ga-etinye akwụkwọ maka OBM maka ụdị ọrụ abụọ:
• ihe omume ndị ikike ruru ala ga-enyocha ma ọrụ ahụ dabara adaba maka ọnọdụ mpaghara;
• eme ihe maka nyocha ihe metụtara gburugburu ebe obibi bụ ihe iwu. Ntụle dị otú a na-elekwasị anya karịsịa na mmetụta ọjọọ na gburugburu ebe obibi.
Ihe omume ndị ahụ nwere ike ịgụnye ịmalite ụlọ ọrụ, kamakwa ịme mgbanwe. Ọ ga - ekwe omume na achọrọ OBM abụọ maka otu ụlọ ọrụ. Mgbe itinye akwụkwọ maka OBM maka ụfọdụ ọrụ, ikike tozuru oke, na-abụkarị ndị ime obodo, ga-enyocha ọrụ dị na ajụjụ ahụ tupu ịmalite ịmalite ọrụ gị. Nke a ga - ebute ikike ma ọ bụ ọjụjụ.
Iwu Atụmatụ Gburugburu gburugburu ebe obibi
Ndị omebe iwu nabatala iwu a, a na-atụkwa anya ịrụ ọrụ na 2021. Isi onyinye nke gburugburu ebe obibi bụ mkpokọta iwu dị iche iche dị ugbu a iji mee ka iwu na gburugburu ebe obibi bụrụ ihe doro anya na-enwe mmekọrịta. Ndị ọka iwu nke Law & More nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara ntụgharị mgbanwe na mgbanwe enwere ike ịchọrọ maka ụlọ ọrụ gị.